ကြုံရဆုံရ ဂျပန်ဝိညာဉ်လောက (အပိုင်း -၁) | ပျူနိုင်ငံ
Posted by ကိုအောင် at 10:50
မကျွတ်မလွတ်သေးသူတွေကိုတော့ သနားလိုက်တာဗျာ..။ အော် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ တိုးတက်ပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အနည်းငယ် အားနည်းတယ်လို့ မြင်မိတယ်ဗျ။
ဂျပန်သူရဲက. ဂျပန်ဝတ်စုံ. ကီမိုနိုနဲ့. လားဟင်?
မကျွတ်လွတ်သူတွေက လူဖြစ်လာတဲ့သူတွေထက် ပိုများတယ်တဲ့။
အတိတ်ဘဝအကြောင်းကံမလှတော့ ကျွတ်တန်းဝင်ဘို့ကို ဘယ်လောက်တောင် စောင့်နေကြရရှာမလဲနော်။ ဒါတောင်အမျှဝေတာကို သာဓုခေါ်နိုင်အုံးမှလေ။ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေ ဖတ်ရတာစိတ်ဝင်စားဘို့ကောင်းတယ်။ မျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါ ကိုအောင်ရေ။
27 October 2011 at 06:05
ညကတည်းက Face Book မှာ သရဲခြောက်လို့ လန့်နေတာ
ခုလည်း သရဲအကြောင်း လာဖတ်ပြန်ပြီ။
သရဲတွေက face book အထိပါ ရောက်ရောက်လာတတ်တယ် ကိုအောင်ရေ.
ဂျပန်သရဲမရှိတဲ့ အိမ်ကို ဦးညီပု သမီးငှားနေဖူးတယ်။ အဲဒီအမကို သရဲမက ညတိုင်းခြောက်နေတာ ဖယ်ပေး ဖယ်ပေးနဲ့အမ အိပ်တဲ့ နေရာက သရဲမ ဆွဲကြိုးချ သေတဲ့ နေရာတဲ့
အမယ်မင်း သရဲမကိုအမျှပေးဖို့ အဲဒီ အမက ရန်ကုန်ဖုံးဆက် ပြီး ဆရာတော်က ဖုံးထဲက မေတာပို့သရဲမ က အပြင်က ကြမ်း။ နောက်ဆုံးတော့ ဘုန်းဘုန်းက ဂျပန်မ မြန်မာလို မေတာပို့ တာ နားမလည်ဘူး ဒီအိမ်က အမြန်ပြောင်းတော့ ဆိုတာနဲ့အိမ်ပြောင်းရတယ်။
ဇတ်လမ်းထဲက သရဲတွေက မြန်မာလို နားလည်လို့ ဖြစ်မယ်
ကိုယ်တွေ့ ဆိုရင် ကြောက်မှာ သေချာတယ် အခုတော့ မကြုံပါစေနဲ့ လို့ ဘဲ ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဆုတောင်း နေရတာ
21 November 2011 at 05:43